Sharciga Dakhliga maka hadlayaa qeyb-siga dakhliga iyo dhismaha hay’adda Canshuurta? – Kalfadhi
Xildhibaannada Golaha Shacabka BJFS ayaa 21-kii bisha Oct meel-mariyay hindise-sharciyeedka Dakhliga, kaas oo horay usoo maray akhrinta labaad.
Ku-simaha Guddoomiyaha ahna Guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee Golaha Shacabka Mudane Cabdi wali Ibraahim Sheikh Muudey oo kulanka Guddoominayay ayaa sheegay in lix xildhibaan ay ka aamuseyn u codeynta hindise-sharciyeedka, laba xildhibaanna ay diideen halka 135 Xildhibaan ay u codeyeen sharciga.
Haddaba sharciga Dakhliga ayaa wax-yaabaha ugu muhiimsan ee uu ka hadlaayo waxaa kamid ah, canshuurta iyo cida ay waajibka ku tahay in laga qaado, qofkii bixin-waaya waa maxey ganaaxa uu muteysanaayo, qofkii canshuur dheeraad ah bixiya qaabkee canshuurta loogu celinayaa,.
Sharciga Dakhliga Dalka, gebi ahaan kama hadlayo, qeyb-siga dakhliga iyo kheyraadka Dalka iyo dhismaha hay’adda Canshuurta Dalka Soomaaliya. Shuruucdaasi waa shuruuc kale oo guddiga uu doonayo in dib loosoo gellin doono sharciga.
Dad badan waxaa laga yabaa in ay is-weydiiyaan waa maxay sababta qodobadaasi muhiimka ah aysan ugu jirin sharci uu Baarlamaanka uu meel-mariyay?